Iyo yekuvaraidza yekugadzira yehembe yekugadzira machira
Kugadzirwa kwemachira kunogona zvakare kunzi kuve kwechipiri dhizaini yemachira ehembe. Icho chinoreva kugadziriswa kwechipiri kwemachira akapera zvinoenderana nedhizaini inoda kuburitsa mitezo mitsva yehunyanzvi. Iko kuwedzera kwekufunga kwemugadziri uye kune zvisingaenzanisike mitsva. Inoita ...
Chakaita zvokugadzirwa zvinhu
1. chiffon Chakagadzirwa chando hachiwanikwe mujira rekupfeka rezhizha, rakagadzirwa nemakemikari fiber zvinhu, ndiro vhiri rezvinhu zvakagadzirwa. Chiffon jira kuunyana-kusagadzikana kwakakwana, uye wepamusoro muviri une yakashongedzwa, yakasikwa pendende, inotonhorera uye inozorodza kunzwa, maitiro ekupfeka kuti akanaka sei-anotaridzika. Asi chiff ...
Kwakachena zvinhu zvakasikwa
1. Mucheka werineni Mucheka, hazvina basa kutaura, ndiwo anomhanyisa-mbatya dzezhizha. Iyo inobvumidza iyo ganda kufema, asi zvakare inofema kwazvo haikupe iwe ziya rakazara, hapana dambudziko remagetsi, zvakare rakapfava kune iro rinobata, vanhu venyama vane hushamwari. Uyezve, jira pacharo rakanyanya ...